माइक्रोको ठक्करबाट चालकको मृत्यु::Hamrodamak.com
माइक्रोको ठक्करबाट चालकको मृत्यु
दमक,१२ जेठ / झापाको कमल गाउँपालिकामा आज साँझ भएको सवारी दुर्घटनामा परि एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
कमल गाउँपालिका– ५ पाथीभरा शसस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्प अगाडी भएको सवारी दुर्घटनामा परेर कमल गाँउपालिका –३ बस्ने ३३ बर्षिय लोकेन्द्र पाण्डेको मृत्यु भएको हो । मृतक पाण्डे मोटरसाइकलमा सवार थिए ।
पश्चिमबाट पूर्व तर्फ जादै गरेको मे. ३ प ३९४५ नम्बरको मोटरसाईकललाई र बिपरित दिशाबाट आएको को. १ ज ९५३ माईक्रोबसले ठक्कर दिएको थियो । माईक्रोको ठक्करबाट गम्भिर घाईते बनेका पाण्डेको दमकको लाईफलाईन अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको इलाका ट्राफिक कार्यालय दमकले जनाएको छ । दुर्घटनामा संलग्न दुबै सवारी साधन ईलाका प्रहरी कार्यालय दमकको नियन्त्रणमा रहेको जनाईएको छ ।
शनि, जेष्ठ १२, २०७५ मा प्रकाशित